Ukukhala ehlotyeni kunye neencwadi zeklasi ezi-7 zakudala kunye nezincinci | Uncwadi lwangoku
Ukukhala ehlotyeni kunye ne-7 yeklasi kunye neencwadi ezothusayo zakudala
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Amabali, Uloyiko
Ihlobo lilapha. Kuyinyani ukuba lo nyaka uthathe ixesha elincinci ukuba uze kwaye ndiyonwabele imozulu entle ebandayo nemvula kuyo yonke indawo. Kodwa ngoku. Iyeza i calor, que kum iyafana noloyiko nesihogo, nangona ndizalwe ngoJulayi 5. Iya kuba ziinyanga ezimbini okanye ezintathu ze-loooong yokubila kunye nendawo yokuhlala ebumnyameni nakwimeko yomoya.
Kodwa ekugqibeleni, yile nto iyichukumisayo. Inyani yile yokuba andikuthandi ukoyika xa ndifunda nam, kodwa ndiyavuma ukuba ngamanye amaxesha ayonzakalisi kwaye abafundi abaninzi bayayithanda. Ke ukubulisa ihlobo, bayaya izihloko ezimbalwa ezoyikisayo. Iiklasikhi ezihlonishwayo ze Stoker, Poe okanye uStevenson, abanye bayoyikeka e-Roman Hispania kunye nomxube othile wesayensi kunye noloyiko lwe-atavistic
1 Umqala weWhorm Worm - iBram Stoker
2 Esihogweni isihogo - Ismael Martínez Biurrun
3 I-Gothic Frenzy-Ababhali abahlukeneyo
4 Uhlaselo lweeRats - uJames Herbert
5 UOlalla - URobert Louis Stevenson
6 Isangqa sengcuka - u-Antonio Calzado
7 Gcwalisa amabali-Edgar Allan Poe
Umqala weWhorm Worm - IBram Stoker
Dracula kusenokwenzeka ukuba wawugubungela wonke umsebenzi walo mbhali waseIreland. Kodwa Umqala weWhorm Worm inomngxunya okhethekileyo kum. Unxibelelwano lwam lokuqala neli bali yayileli radiophonic Kwaye xa ndiyifunda kamva, ndandinomdla ngendlela efanayo. Ngapha koko, ichaphazele namanye amabali am amnyama.
UStoker wayipapasha sele ikhona 1911, xa wayesele egula kakhulu kwaye eneengxaki zemali ezinkulu awayehlala enazo. Ke Kwakuyincwadi yakhe yokugqibela kuba wasweleka kunyaka olandelayo. Kuthiwa wayibhala phantsi kwempembelelo yeziyobisi kwaye yayilulonwabo lwentsomi yesiNgesi ka Isibungu seLambton. Elo yayiligama lesidalwa Inyoka enesiqingatha kunye nenamba yesiqingatha, owayehlala efihlakele enzulwini yequla. UStoker ubuyise le miba ingaphezulu kwendalo kunye neyona nto imnandi ukongeza ekubandakanyeni amanye amacebo ngamayelenqe amatsha, impindezelo kunye nothando.
Kodwa ngasemva iklasikhi ukulwa phakathi kokulungileyo nokubi, emntwisiwe UAdam Salton, osisityebi waseOstreliya, kwaye ILady Arabella ngoMatshi, Ummelwane wakhe kwenye indlu yobukhosi embindini welizwe lesiNgesi kunye nebhinqa elihle njengemfihlakalo kwaye, ekugqibeleni, yindlela yokulukuhla kodwa ebulalayo yomntu wombungu wesihloko.
Ngo-1988 umlawuli waseBritane UKen Russell wenza Uhlobo lwemovie simahla nge UHugh Grant njengomntu ophambili.
Ikhephu esihogweni -U-Ismael Martínez Biurrun
Kwabhalwa ngo-2006 inoveli yokuqala yalo mbhali kunye nombhali wesikrini ovela ePamplona. Kuyo usixelela ibali lika UCelio RufoIgqala Umkhosi, owayengumbhali kwimikhosi kaPompey the Great. Kodwa ngoku uCelio Uhlala kwimeko eyoyikekayo kwaye usecicini lokuphambana. Ufuna ukulibala kodwa ufuna ukuxelela okwenzekileyo kuye e-Hispania. Xa edibana nelinye igqala leLegion, elasinda kwiziganeko ezimanyumnyezi azibonileyo, angakwenza oko ekugqibeleni.
Ke siyifumene into eyenzekileyo kwifayile ye- ubusika ngo-75 BC eHispania, kwikhefu kumlo owawuphakathi kukaPompey nomvukeli uSertorius. Siza kuyazi ibali le-Tribune Imikhosi, Indoda ebanjwe phakathi kokunyaniseka kwakhe eRoma kunye nemvelaphi yakhe yaseBasque. Kwiinkumbulo zikaCelio siza kuya kwimishini eyenziwa yi-Arranes ezintabeni, apho yena nabantu bakhe baya kudibana khona unkwantyo lwamandulo olufihlakeleyo nzulu ehlathini.
Ubushushu besiGothic - Ababhali abohlukeneyo
Indlu yokupapasha iValdemar ngumgangatho kuncwadi olothusayo kwaye kulo mthamo kukho ukhetho Amabali ama-7 Ababhali ababaluleke kakhulu kuhlobo lwe Ibali leGothic. Bazi:
Maddalena okanye Isiphelo seFlorentines, nguHorace Walpole.
Inimba yomthombo, nguWilliam Beckford.
Anaconda, ngu-Matthew G. Lewis.
IVampire, NguJohn W. Polidori.
Idayisi, nguThomas de Quincey.
Inqaba yaseLeixlip, NguCharles R. Maturin.
Iphupha, NguMary Shelley.
Ukuhlaselwa kweempuku -UJames Herbert
Lo mbhali oliNgesi usebenze njenge imvumi kwaye kamva njenge umlawuli wezobugcisa evela kwiarhente yentengiso. Ngo-1977 wagqiba ekubeni azinikezele ekubhaleni ngokupheleleyo. Iyaziwa ngokukodwa isebenza ngokuzinikela kuhlobo oloyikisayo. Uninzi lweenoveli zakhe zithathiwe zenziwa ifilimu, umabonwakude, unomathotholo kunye nehlabathi lemidlalo yevidiyo, njengale.
Umxube we Inoveli eyoyikisayo yesayensi ezi nkwenkwezi zezilwanyana, Iigundane, ezithi ngokutshintsha okungaqhelekanga, zibe zizinto ezothusayo nezikhulu kakhulu ezondla inyama yomntu, ahlasele isixeko saseLondon aze agqibe abemi baso. Kwaye ngokutshintsha iziqendu ezoyikisayo sinolucazululo lwengqondo lwabalinganiswa kunye namabali abo, anje ngalawo athandana namanye okanye ihenyukazi, njl. Isingqisho sayo sikhokelela kuxinzelelo oluqhubekayo olukwaziyo ukubambisa umfundi.
Olala - URobert Louis Stevenson
Umbhali omkhulu waseScotland lolunye udidi lohlobo kunye Olala Yiyo ibali eloyikekayo epapashwe kwiNgqokelela yaMabali aQhelekileyo ka 1897: Amadoda avuya kunye nezinye iindaba kunye neentsomi, oko kwavela nje ngaphambili Imeko engaqhelekanga kaGqirha Jeckyl kunye noMnu Hyde.
Ibali lelika Imvelaphi ithandwa kakhulu ngexesha lama-Victorian, i Isothuki yeshillingi, ngokubanzi, ebekwe ngaphakathi kulwakhiwo lwe ulwaphulo-mthetho nobundlobongela. Umlinganiswa ophambili kuyo ngu ijoni elingxwelerhekileyo, oya eSpain ukuba achache. Apho udibana ne- eyimfihlakalo nenomtsalane kumfazi omncinci, Olalla, intombi yommkeli wakhe, kwaye yinxalenye yosapho olufihla i Imfihlo ecekisekayo.
Isangqa sengcuka -U-Antonio Calzado
UCalzado ngumbhali waseCordovan ohamba ngaphakathi kwinoveli yezembali ngeedosi ezinkulu zefantasy kunye noloyiko. Kweli bali umlinganiswa ophambili, uDaniel, ubona ukuba uphela njani umtshato wakhe xa kusweleka intombi yakhe. Uzifihla kwindawo yakhe yedwa de afumane ileta evela kumzala wakhe uAnxo, unogada wasezilalini waseGalician, omnika iholide apho. UDaniel ufudukela kwindlu enkulu ephethwe ngutatomkhulu wakhe, onyana wakhe wayexakeke zii-lycanthropy. Kwaye, ngequbuliso, kwenzeka uthotho lokubulala oluchaphazela ubomi bedolophu.
Gqibezela amabali -U-Edgar Allan Poe
Kwaye kungenzeka njani ukuba i-Master Poe ilahlekile kolu khetho lwezihloko zoyikisayo? Ezi Gqibezela amabali dibanisa ndawonye amashumi asixhenxe ewonke phakathi kwawo awona akudala afana nala Umbhalo wesandla ofunyenwe kwibhotile, uBerenice, Inkosi yesibetho, Ligeia, Izenzo zolwaphulo-mthetho ze-rue Morgue, uMtyholi kwi-bell tower, Ukuwa kweNdlu ka-Usher, Eleonora, Iqula kunye ne-Pendulum, Intliziyo ye-Tell-Tale, iMask yokuFa okuBomvu, i-Oval Portrait, i-Black Cat, i-Gold Beetle o Umphanda we amontillado.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uloyiko » Ukukhala ehlotyeni kunye ne-7 yeklasi kunye neencwadi ezothusayo zakudala
Udliwanondlebe noRosa Valle, Ukusuka kwiLubina Josefina ukuya kwi-protagonist kwiveki emnyama yaseGijon.
Tweet: Into entsha yokubhala?